को हुन त यति शुन्दर तथा ह,ट अभिनेत्री ? गर्दैछिन् अब छिट्टै बलिउडमा डेब्यु , हेरौ तस्बिरमा । « गोर्खाली खबर डटकम
को हुन त यति शुन्दर तथा ह,ट अभिनेत्री ? गर्दैछिन् अब छिट्टै बलिउडमा डेब्यु , हेरौ तस्बिरमा ।
टिभीकी चर्चित अभिनेत्री अवनीत कौर छिट्टै फिल्मी दुनियाँमा पाइला राख्ने भएकी छिन् । अवनीत फिल्म ‘टिकु वेड्स शेरु’ बाट बलिउडमा डेब्यु गर्दैछिन् । अवनीत आफ्नो नयाँ यात्राबाट खुशी र भावुक छिन्। यस्तो अनुभूति हुनु जायज पनि हो, किनभने यहाँसम्म पुग्न निकै मिहिनेत गरेकी छन् । अवनीतको प्रतिभा अहिले मानिसहरूले चिनेका होलान्, तर अभिषेक बच्चन समेत मोहित भएको कुरा सार्वजनिक भएको छ।
केही वर्ष अघि ऐश्वर्या अभिषेकको फिल्म ‘मा देखिएकी थिइन् ।
फिल्म यात्रा सुरु हुनुअघि अवनीतले सामाजिक सञ्जालमा एउटा भिडियो शेयर गरेकी थिइन् । भिडियो निकै भा,वुक र मन छुने छ, जसमा अभिनेत्रीको सं,घर्षको कथा देखाइएको छ । भिडियोमा, अवनीतले फ्यानहरूलाई कसरी टिभीदेखि बलिउडको यात्रा गरीन् र मानिसहरूको मनपर्ने बनीन् भन्ने कुरा समेटेकी छन् । यस भिडियोमा अभिषेकले अवनीतलाई ‘उनी आगामी केही वर्षमा फिल्मी संसारको हिस्सा बन्नेछौ’ भन्दै देखिएका छन् ।
अवनीत सोसल मिडियाकी चर्चित कलाकार पनि हुन्
अवनीत कौर एक टेलिभिजन र म्युजिक भिडियो कलाकार मात्र होइन सामाजिक मिडिया कलाकार पनि हुन्। इन्स्टाग्राममा उनका २६ लाखभन्दा बढी फलोअर्स छन् । अवनीत प्रायः आफ्नो काम र जीवनशैलीलाई लिएर चर्चामा रहन्छिन्।
यी हुन् पौने करोडको कार चढ्ने नेपाली हिरो, कुन कलाकारले कुन गाडी चढ्छन् ?
अति नै मार्मिक कथा मन थामेर नरोई पढ्नुहोला!अरुलाई पनि पढ्ने मौका दिनुहोला